Janaayo | 2009 | WEEJIDOW
Archive for Janaayo, 2009
Janaayo 31, 2009
War Deg Deg ah: Madaxweyne Shariif oo isku diyaarinaya in maalinta berri ah uu safar ugu ambaboxo dalka Itoobiya si uu uga qeyb galo…
Madaxweynaha cusub ee dalka Soomaaliya Sheekh Shariif Sh. Axmed ayaa saacadaha soo socda isu diyaarinaya inuu ka ambaboxo dalkan Jabuuti ee xarunta Jamhuuriyadda Jabuuti isagoo ku sii jeeda magaalada Addis abab ee xarunta dalka Itoobiya.
Madaxweynaha ayaa waxaa safarkiisan ku wehlin doona xubno ka kala tirsan dowladdii TFG iyo isbaheysigiisii ARS, waxaana xubnahaasi ka mid ah Sharif Xasan Sheikh Aadan iyo Prof. C/raxmaan Ibbi, iyadoo haatana ay sugayaan waraaqihii casuumaada shirka oo la filayo inay soo gaaraan saacadaha soo socda, inkastoo xubno ku dhow dhow ay ii xaqiijiyeen in maalinta berri ah uu ka ambobixi doono Jabuuti.
Madaxweyne Shariif ayaa safarkiisan ugu horeeya ee Addis ababa ,waxaa la filayaa inuu kaga qeyb galo halkaasi shirkii madaxda wadama midoobay ee Africa tiradooduna kor u dhaafeyso 24 wadan oo ay ku jirto Somalia, waxaana galabta daqiiqadihii ugu dambeeyey si hoose loo shaaciyay dib u dhac ku yimid safarkiisii la filayay inuu munaasabadda dhaarintiisa kadib ka dhoofo Jabuuti sababo lagu sheegay dhinac farsamada.
Safarkan madaxweyne Shariif ayaa noqonaya haddii uu tago Addis, markii ugu horeysay abide e uu gaari Sheekhu caasimadda Itoobiya, waxaana si weyn loogu xusuustaa Shariif-ka khilaafkii xooganaa ee kala dhaxeeyey xukuumada uu hogaamiyo Meles Zenawi, waxayna warar soo baxaya sheegayaan in Meles la filayo inuu garoonka ku soo dhoweeyo madaxweyne Shariif, si caalamka loo tuso in la dhameeyey khilaafaadkaasi.
Ciidamo ka tirsan DF oo saaka falal iskugu jira qabqabasho, dhac saf mareen ah iyo jirdilba ka geystay agagaarka Hotelka Ambasador
Ciidamo ka tirsan milateriga iyo Booliska DF Somalia ayaa saaka falal iskugu jira dhac baahsan iyo jirdilba ka geystay qeybo ka mid ah wadada Maka Al-Mukarama ee magaalada Muqdiso gaar ahaan agagaarka Hotelka Ambasador. Xili aysan halkaasi ka jirin wax shaqaaqooyin oo ah looga soo horjeedo.
Sida dadka deegaanku sheegeen ciidamadan oo tiradoodu ay gaareysay illaa 10 askari oo ku hubeyssan qoryaha fudud ayaa galay isla markaana dhac saf maareen ah u geystay qaar ka mid ah goobaha ganacsiga ee halkaasi ku yiilay iyagoo ka qaatay lacago badan mobilo iyo hanti kale, waxaana ka mid ah goobahaasi xarun lagu magacaabo Farayare Travel Agency, iyagoo jirdil xoogan u geystay horeyna u kaxeystay mas’uul ka tirsanaa shirkadaasi oo magaciisa lagu sheegay Mahdi.
Sidoo kale, ciidamadan ayaa dhac iyo baarasho saf mareen ah kula kacayey dadweynaha isticmaalayey wadada, gaar ahaan inta u dhexeysa Isgoyska KM4 ilaa hotelka ambasador ee magaalada Muqdisho, waxaana la arkayey ciidamdaan oo baaranaya dadka ka soo baxa wadooyinka xaafadaha, waxaana falalkaasi ay argagax xoog leh geliyeen dadweynaha ku dhaqan deegaankaasi oo iyagoo firka naxsan ku cararayey xaafadaha.Arintan ayaa ku soo beegantay xili dadweynaha ku dhaqan magaalada Muqdisho ay saaka u dabaal degayeen xilka madaxweynaha cusub ee DF Somalia oo xalay loo doortay Sheekh Shariif Sheekh Axmed.
Madaxweyne Shariif oo u duuli doona dalka Ithopia maalinta berri ah.
Madaxweynaha cusub ee dowlada midnimada qaran ee dalka Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo Shariif Xassan Sheikh Aadan iyo xubno kale ayaa maalinta berrito waxa uu u duuli doona magaaalada Adis Ababa halkaas oo uu kaga qeyb geli doono shirka madaxda midowga afrika.
Madaxweyne cusub oo maanta gellinka hore loo sameyn doono xaflad dhaarin ah oo ka dhaxeyso Hotelka Kambiski ee jabuuti ayaa xafladaasi ka dib waxa uu isku qaban qaabin doonaa sidii uu uga qeyb geli lahaa shirkada madaxda midowga afrika.
Xaflada dhaarinta ayaa waxa lagu wada anay ka soo qeyb galaan diblumaasiyiin shisheeye kuwasoo ka kala socda Africa midowga yurub iyo wadamada carabta.
Shariifka ayaa marka uu ka soo laabto shir madaxeedkaasi ayaa waxaa horyaala arimo badan oo ay ka mid tahay sidii dowlada uu hogaamiyo loogu celin lahaa gudaha dalka islamarkaana ay u howl geli laheyd.
Madaxweynaha cusub ayaa la filayaa inuu weydiisan doono madaxda afrika ee kulankaasi ka soo qeyb galaya inay taakeeraan dowladiisa islamrkaana waxaa laga yaabaa inuu codsado ciidamada nabad ilaalinta ahe ee ka socda midowga afrika sidii loo soo dhameystiri lahaa.
Ahmedou Ould-Abdallah oo ah u qeybsanaha arimaha soomaliya ee qaramada midoobay ayaa waxa uu ku baaqay taageero caalami ah ka dib markii ay soo dhamaatay doorashada habeenkii xalayto.
“Waxaan rajeynayaa oo aan hubaa in beesha caalamka ay taageero buuxda siin doonto dadaaladii dib u hishiisiineed iyo dowladii ka soo baxday si ay u soo celiso kala danbeyntii dalka”
Sheekh Shariif Madaxweynaha cusub ee soomaaliya ayaa waxaa sidoo kale laga sugayaa inuu soo magacaabo ra’isal wasaare kasoo soo dhisi doona xukuumad loo mideysan yahay.
Qodobo muhim ah oo uu madaxweynaha uu kaga hadlay qudbadii uu ka jeediyay xafladii dhaarinta.
Madaxweynaha Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa waxa uu qudbo muhim ah uu ka jeediyay madasha ay ka socotay dhaarinta isagoo soo hadal qaaday arimo dhowr ah.
Madaxweynaha ayaa waxa ka hadlay xiriirka uu la sameyn doono wadamada deriska ah isagoo sheegay inay kula dhaqmi doonan siyaasad fur fururan oo aan aheyn faro gelin balse iskaashi ah waxuuna shegay inay aaminsan yihiin mabda’ dersi wanaaga tasoo ay ka dhabeyn doonaan.
Wuxu kaloo sheegay in wadamada Igad ku jira ay kula dhaqmi doonan si ka wanaagsan sidii dowladihii hore ee dalka soo maray isagoo xusay in wixi qilaaf ah la dhameyn doono taasna ay ka shaqeyn doonaan.
Mar uu soo hadal qaaday arimaha burcad badeeda ayaa waxa uu Madaxweynuhu sheegay in ay arintaasi xooga saari doonaan islamarkaana ay wax ka qaban doonaan sida ugu macquulsan.
Madaxweynaha ayaa waxa uu mar kale ku soo celiyay hadalkiisa ahaa inuu bedeli doona sumcad xumada loo soo jiiday diinta islaamka isagoo shegay in taasi u waji doonaan sida diinta ay qabto iyo dhaqan suuban ee soomaalida.
Sidoo kale Madaxweynaha waxa uu u mahadceliyay nuur xasan xuseen nuur cadde iyo shariif xasan sheekh aadan oo uu labadooda ku aamanay dadaalka ay ka soo galen in dib loo hishiiyo isagoo xusay in baal dahab ah taariikhdooda lagu qori doono.
Isku soo duubow xafladii dhaarinta ayaa waxa ay ku dhacday jawi wanaagsan oo farxad ay ka muuqatay.
Madaxweyne Sheekh Shariif oo Loo dhaariyay xilka Madaxweynaha Soomaaliya
Waxaa goor dhaweyd la dhaariyay Madaxweynaha DFKMG ah ee soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyadoo haatan madaxweynahay uu jeedinayo qudbadiisa madaxwenenimo ee ka dib markii la dhaariyay.
Xafladan ayaa waxaa ka soo qeyb galay wakiilo badan oo ka kala socda beesha caalam iyadoo sidoo kalena uu goob joog ahaa Ra’isal wasaaraha jabuuti Dileyte axmed Dileyte.
Dowlada jabuuti ayaa waxa u hadlay wasiirka ka tirsan xukuumada jabuuti oo wakiil ka ahaa madaxweynaha Jabuuti oo ku sugan magaalada Adis ababa halkaasoo ay kaga qeyb galayo shir madaxeed midowga afrika.
wasiirka ayaa waxa codsi u soo jeediyay beesha caalamka isagoo ugu baaqay in ciidamo shisheeye aysan dalka waxba ka qaban karin lakiin loo baahan yahay in ciidamada dalka soomaaliyeed la aas aaso oo qarashka laga bixiyo.
Waxa uu sidoo kale u soo jeediyay Madaxweynaha DFKMG ah Sheekh Shariif Sheekh Axmed isagoo ugu baaqay inuu kalsooni ku abuuro shcabka soomaaliyeed oo ku tilmaamay in la baray dadka soomaaliyeed wax kasta oo la soo aas aaso inaysan shaqeyneynin balse taasi in la beeniyo loo baahan yahay.
“waa in aan lagu jirin rajo xumada shacabka la baray waa in kalsooni la abuuraa’ ayuu yiri wasiir xaamud oo qudbo qiimo leh halkaasi ka jeediyay.
Madaxweynaha Somaliya ayaa haatan uu wadaa qudbadiisa iydaoo aan idiin soo gudbin doono qodobada ugu muhimsan ee madaxweynaha ka hadlo.
Isku Soo bax lagu Taageerayo Madaxweynaha Cusub ee Soomaaliya oo Maanta ka dhacday inta badan gobolka Banaadir
Isku Soo bax lagu Taageerayo Madaxweynaha Cusub ee Soomaaliya ayaa Maanta ka dhacday inta badan gobolka Banaadir.
Dibaxyadani lagu soo dhaweeynayay Madaxweynaha Cusub ee Soomaaliya Shiikh Shariif Shiikh Axmed ayaa waxaa ay maanta ka dheceen inta badan xaafadaha magaalada Muqdisho.
Dadweyne gaarayay boqolaal qof oo isugu jira qeybaha kala duwan ee Bulshada isla markana wejiyadooda laga dheehanayay sida ay ugu faraxsan yihiin qabashada hogaanka dalka ee Shiikh Shariif Shiikh Axmed ayaa maanta isugu soo baxay inta badan degmooyinka gobolka Banaadir.
Goobaha ay dadkani isugu soo bexeen ayaa waxaa ka mid ah garoonka Kubada Cagta ee Muqdisho Stadium iyo degmooyinka Yaaqshiid,C/siis,Shangaani,Shibis iyo degmooyin farabadan oo ka tirsa gobolka Banaadir waxaana ay dadkaasi ku qeylinayeen erayo ay ku taageerayaan madaxweynaha cusub,waxaana ay wateen boorar ay ku asteesan yihiin Magaciisa iyo sawirada Madaxweynaha.
Tan iyo markii xalay saqdii dhexe uu ku guuleeysatay madaweyna doorashadii ay ku tartamayeen in ka badan 15-musharax isla markana ugu danbeeyntii ay isugu soo bexeen Madaxweynaha iyo Maslax Max’ed Siyaad taasi oo guusha ay ugu danbeyn ku raacday Shiikh Shariif Shiikh Axmed Madaxweynaha dowlada Soomaaliya waxaa guud ahaan dalka ka dhacay dabaal degyo lagu soo dhaweynayo arintaasi waxana magaalada Muqdisho xalay ka dhacayay kadib doorshada Rasaas farabada taasi oo u muuqatay mid loogu dabaal degayo waxana saakay marka uu waaga barayay dibaxyo ay dhigayeen dad iskooda isku soo abaabulay.
You are currently browsing the WEEJIDOW blog archives for Janaayo, 2009.